Ku Cibro Qaado: Wiilkiii Xalaal Quutaha Ahaa Iyo Dhawrkii Xabbo Ee Timirta Ahaa (Qiso Cajiib Ah) - Wargane News
Home Entertainment & Lifestyle Ku Cibro Qaado: Wiilkiii Xalaal Quutaha Ahaa Iyo Dhawrkii Xabbo Ee Timirta...
Ku Cibro Qaado: Wiilkiii Xalaal Quutaha Ahaa Iyo Dhawrkii Xabbo Ee Timirta Ahaa (Qiso Cajiib Ah)
Wuxuu ahaa Wiil Dhalinyaro ah wuxuu maraayey Beer weyn Dhinaceeda, wuxuu arkay Dhowr Xabo oo Timir ah oo Geed Beerta ka mid ah ka soo Dhacday. Dhawrkii Xabbo ee Timirta ahaa ayuu Cunay Baahi markaas heysay Awgeed, markuu dhamaystay ayuu xasuustay inaanu Iibsan, Qofkii lahaana ka Fasax qaadan, wuxuuna ahaa Wiil ilaahay ku Xiran oo Calaal quute ah, wuxuu Go’aansaday inuu Beerta Galo oo Ninka leh Cafis Weydiisto, una Sheego inuu Dhowr Xabbo oo Timir ah oo Geed Geertiisa ka soo Dhacay Cunay. Intaas ka dib Beertii ayuu soo galay wuxuu u yimi Ninkii Beerta lahaa oo Dhex joogo, wuxuu u Sheegay sida ay Wax u dhaceen, wuxuuna ka Codsaday inuu Cafiyo oo uu Saamaxo.
Ninkii Beerta lahaa wuxuu ku yiri:- kuma Saamaxayo, Kolkaas Wiilkii ayaa yiri:- haddaba Qiimahooda ii Sheeg aan Lacag ahaan kuu Siiyee, Ninkii Beerta lahaa ayaa haddanaa yiri:-Lacagna kaa Qaadan maayo, wuxuu Wiilkii Dhalinyarada ahaa yiri:- haddaba aan Beerta kaaga Shaqeeyo si aan isaga Gudo Qaanta, Ninkii Beerta ayaa yiri:- Maya Beertana iiga Shaqayn Meysid, kumana Saamaxayo. Intaas kolkuu ku yiri Wiilka aayuuna iskaa baxay Ninkii Beerta lahaa.
Wiilkii Dhalinyarada ahaa waa ka Daba Dhaqaaqay isagoo aad uga Baryaaya inuu Cafiyo, kana Tuugaya inuu Saamaxo, Ninkii Gurigiisii ayuu Galay, Wiilkiina isaga oo Murugaysan ayuu Gurigii Ninka ag Fadhiistay, Salaadii Casar markii La Gaaray ayuu Ninkii soo baxay mise Wiilkii wuxuu ku sugayaa Guriga Hortiisa, wuxuu haddana ka Codsaday inuu Saamaxo, Ninkii aad ayuu ula yaabay wiilkan dhalinyarada ah ee aadka uga murugaysan dhawr Xabbo oo Timir ah oo uu Cunay, ka dibna waxuu ku yiri:- Waan ku Saamaxayaa, laakiin Hal Shuruud, haddii aad Ogolaatid ayaan kuu Cafinayaa Timirtii aad Cuntay, Wiilkii oo Faraxsan ayaa yiri:- maxay tahay waan yeelayaa oo waan Samaynayaa, Ninkii Beerta ayaa markaa yiri:- Gabar aan Dhalay oo Indha La’, oo aan Hadlin, oo Dhago La’. haddaad Guursatid waan kaa Saamaxayaa Dhowrkii Xabbo ee Timirta ahaa ee aad Cuntay.
Wiilkii Talo ayaa ku Cadaatay wuxuu Sameeyo ayuu Garan waayey maadaama uu Xalaal Quute ahaa, waxaan loo Idmin ama Iibsana uu Cunay, daamaxaadeediina Xujadan lagu Xiray waa yahay ayuu yiri waan Guursanayaa.
Ninkii Gabadha Dhalay wuxuu Balan qaaday inuu Kharashaka Arooskana uu Isaga Bixinaayo, Wiilkii Gabadhii ayaa lagu Maheriyey, Qolkii loogu Talagalay markuu Galay ayuu Damcay inuu Gabadha Salaamo, ka dibna wuxuu Xusuustay inay Dhego La’dahay, oo Indho La’dahay , Hadalna haba sheegin, haddana wuxuu is yiri iska Salaan oo Ilaah Agtiisa Ajar ayaa lagaaga Qoriye. Kolkaas aayuu yiri:-Asalaamu Calaykum, mise markiiba Gabadhii ayaa u Jawaabtay oo tiri:- Wacalaykuma Salaam.
Wiilkii wuu Naxay, misana Farxay, wuxuu Dareemay inay wax Maqlayso oo Hadlayso, hore ayuu u soo socday wuxuu ka Qaaday Maradii Saarnayd ee ku Daboolneyd, mise waa Gabar Quruxdeeda aas la Cajabeysid oo Wiilkii yaab ayaa ka soo Haray.
Ninkii Gabadha ku Meheriyey ayuu u Yimi oo ku yrhi:- maxaad iigu tiri waa Indho La’dahay oo dhago La’dahay, mana Hadasho?
Ninkii ayaa ugu jawaabaay:- Haa oo wey Dhego La’dahay oo Xumaan ma Maqasho, Way Indho La’dahay oo wax Xun Mey Arag , Ma Hadasho oo Xumaan Afkeeda kama soo Baxdo , adigana waxaan kuugu Guuriyey markaan ku Arkay Dhawr Xabbo oo Timir ahi siday kuu Dhibtay oo aad u tahay Xalaal Quute, markaas ayaan Go’aansaday Gabadheyda inaan kuu Guuriyo, oo aad tahay Nin lagu Amini karo.